Dhis Amaahdaada / Minnesota.gov
Waaxda Minnesota ee Ganacsiga
Laynka Caawinta Macmiilka
Great MN: 800-657-3602
Hubi Warbixinta Amaahdaada
Gudaha kan deegaan dhaqaalaha ee adag, waa u lama huraan inaad yeelato fahan cad oo amaahda ah. Waxaa jira qaabab kala duwan oo lagu isticmaalo amaahda --- qaar inaga mid ah waxay isticmaalaan amaahda si ay balaadhsadaan ilaha oo u iibsadaan hanti kharash badan sida guri ama baabuur, marka kuwa kale ay u isticmaalaan amaahda wax iibsiga maalinlaha ah. Wax kasta xaaladu ha ahaatee, waa muhiim in la fahmo sida amaahdu kuu saamayso adiga. Xusuuso, waa masuuliyadaada inaad door firfricoona ka qaadato waxbarida naftaada ee ku saabsan amaahda.
Warbixinaha amaahda hadda waxaa lagu heli karaa bilaash!
Macaamiisha maaha inay bixiyaan khidmad si ay ku helaan warbixinta ahaamdooda. Mid kastoo ka mid ah shirkadaha uga warbixinta macaamiisha amaahda macmiilka waxaa looga baahanyahay inay bixiyaan warbixinta amaahda oo bilaash ah, marka la codsado, hal mar 12 bilood. Xusuusta tani waa adeeg bilaash ah—yaanay ku daggin iimaylo aanad oggolaan in laguu soo diro ama xayaysiis isku daya inuu khidmad kaa qaado warbixinta amaahda. Visit AnnualCreditReport.com.
Sababteed dib ugu eegaysaa warbixinta amaahda?
Ka warhaynta warbixintaada amaahdu waa muhiim sababtoo ah go’aano badan ayaa hadda ku salaysan sida aad u maarayso maaliyadaada Si aad u hubsato in buundooyinka amaahdu ay ku salaysanyihiin macluumaad sax ah, waa inaad ka fekertaa dib u eegitaanka warbixintaada amaahda ee mid kastoo ka mid ah saddexd axafiisyada ka warbixinta amaahda ugu muhiisan sanad kasta.
Sidoo kale hubinta warbixintaada amaahda waa mid ka mid ah qaababka waxtarka leh ee naftaada looga ilaaliyo tuuganimada aqoonsiga. Dhammaan dadka degen Marayknaka waxay uga warhayaan warbixinta amaahda wixii khalad ah iyo isticmaalka aan la oggolayn iyagoo dalbanaya nuqul bilaash ah oo warbixinta amaahdooda ah sanad kasta oo ka timid mid ka mid ah saddexda xafiis ee qaran ee ka warbixinta amaahda. Equifax, Experian, iyo TransUnion, at AnnualCreditReport.com.
Haddii aad khalad ka hesho warbixintaada amaahda, la xidhiidh wakaalada ka warbixinta amaahda. Waxaa looga baahanyahay inay baadhaan oo ku soo jawaabaan 30 maalmood gudahood oo wargelintaada aad siiso ah.
Baro wax badan oo ku saabsan Warbixinaha Amaahda
Macaamil badan kuwaas oo ay dhibaato dayn haysato waxay caawimo ka raadiyaan adeegyada la talinta sidii badalka kicitaanka dhaqaale. Marka ay jiraan wakaalado badan oo sumcad leh oo caawinaya macaamiisha inay ka baxaan oo ka joogaan daynka. sidoo kale waxaa jira tiro shirkado ah oo ku maqan si ay u dhibaan macmiilka daynku ragaadiyay.
Ballamaha yaraynta degdega ah ee daynka ama qorshayaasha dhammaynta daynka oo leh khidmado la sii qadimo oo sare (boqolaal ama kumanyaal doolar) ayaa calanka cas u noqon kara macaamiisha. Doorashada adeega khaldan ee la talinta dayn waxay kugu sababi kartaa waxyeelo maaliyadeed oo wayn.
Waaxda Ganacsiga Minnesota waxay maamushaa laba nooc oo ganacsiga daynka macliilka ah:
Ururada Adeegyada Amaahda
Shirkadaha Maaraynta Amaahda
Baro wax badani oo Ku saabsan Adeegyada la talinta amaahda
Khiyaamooyinka Ururinta daynta
Waaxda Ganacsigu waxay bixisaa tilmaamahan caawimada leh si ay uga caawiso reer Minnesota inay iska ilaaliyaan noqoshada dhibanayaasha khiyaamooyinka dayn ururinta:
Marka u horaysa na soo wac. Lacag ha u dirin dayn ururiyaha aad u malaynayso inuu maleegayo khiyaamo wac Waaxda Ganacsiga si aad u aragto haddii dadka ay yihiin, xaqiiqdii, dayn ururiyayaal ruqsad haysta
Ilaalsho aqoonsigaag. ha bixin ama ha xaqiijin wax ka mid ah macluumaadkaaga maaliyada ah.
Dhowro lacagtaada. Waydii baankaaga inuu digniin saaro kootadaada ( inta badan khiyaamoolayashan waxay hayaan macluumaadka kootada bangiga ee macmiilka ka hor inta aanay bilaabin dhibaataynta iyaga).
Iska ilaali wicitaanada khiyaamada ah. Ka feejignow haddii daynka aan la xaqiijin karin ama aan wax warqaddo caddayna la helin. Wakhtigaas, waydii qofka soo wacaya inuu joojiyo inuu kula soo xidhiidho oo iska diiwaan geli Diiwanka Qaranka ee Ha soo Wicin ah (National Do Not Call Registry) ama wac 888-382-1222.
Ka dood khaladaadka. haddii aan dayn la xaqiijin, la xidhiidh koox kasta oo ku lug leh si ay saafi uga dhigaan khaladaadka warbixintaada amaahda, sida: ururiyaha daynka ama shirkada sheeganaysa kootooyinka aan la xalin: iyo xafiisyada ugu muhiimsan amaahda. Qor waraaq faahfaahsan oo ku dar warqaddaha taageera si aad u caddayso xaaladaada. Guddida ganacsiga Federaalku waxay bixiyaan ilo dheeraad ah oo ah khaladaadka warbixinta.
garo xuquuqahaaga. Dib u eeg Xeerka dhaqanada Ururinta xaqa ah ee Daynta ee federaalka(FDCPA), taas oo dejisa heerarka caadiga ah ee wakaaladaha ururinta oo mamnuuca farsamooyinka xad gudubka ah. FDCPA waxaa dhaqan geliya FTC oo xad gudubyada waa in laga warbixiyaa Dayn ururuiyayaasha:
Ma sheegan karo sheegashooyin been ama khiyaamo ah.
Looma oggola inay sameeyaan hanjabaad madhan, inuu muujiyo ama maldaho, ama isticmaalo luqad cay ah ama caqiido la’aan ah.
Lama falan qaynayso kootooyinka macmiilka kooxda saddexaad ee aan loo oggolayn.
Si khaldan ugama warbixin kartid macluumaadka warbixinta amaahda ama cadaadiska macaamiisha si loo bixiyo danyta aanay ku qaamaysnayn.
Waa inay baadhaa ansax ahaan khilaafka daynta.